Monado 0.2 biara na otutu nkwado, Vive Wand na Valve Index na ndi ozo | Site na Linux
Ọnwa ole na ole gara aga anyị na-ekwu okwu ebe a na blog banyere Monado nke bu ikpo okwu mepere emepe maka ihe eji eme ihe n'eziokwu nke ọkọlọtọ OpenXR, nke na-akọwa API zuru ụwa ọnụ maka ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa abawanye, yana usoro akwa maka mmekọrịta na kọmputa na-enweghị njirimara nke ngwaọrụ ụfọdụ.
Maka ndi n’amaghi oru ngo a, ha kwesiri ima na Monado na-ezube imepụta mmeghe nke ọkọlọtọ OpenXR site na Oge ojiri gaa n'ụzọ zuru ezu kwekọrọ na ihe ndị OpenXR chọrọ, nke enwere ike iji hazie ọrụ na eziokwu na mejupụtara eziokwu na smartphones, mbadamba, PC na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. Ejiri ọkọlọtọ Khronos kwadoo ọkọlọtọ OpenXR ma kọwaa API zuru ụwa ọnụ maka ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa abawanye, yana usoro akwa maka mmekọrịta na kọmputa na-achikota njirimara nke ngwaọrụ ụfọdụ.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Monado 0.2?
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Monado 0.2?
Ugbu a na akụkọ ndị na-adịbeghị anya, ụmụ okorobịa si Collabora kwupụtara mwepụta nke ụdị ọhụrụ ahụ nke oru ngo "Monado 0.2" na nke, n'ime oganihu agbakwunyere, ọ bara uru ịkọwapụta na ihe nkesa mejupụtara nkwado maka nsụgharị multi-layer, nke m ji mara ugbu a na-enye ohere ngwa itinye otutu owuwu Ihe omume XrCompositionLayer (a mejupụtara oyi akwa maka ntule) na XrCompositionLayerQuad (Ọ bara uru maka ihe UI ma ọ bụ ọdịnaya 2D na ụwa mebere).
Inwe ike ịrụ ọrụ na ọtụtụ ọkwa dị mkpa maka ngwa na-eji anọ n'ígwé na-anọchi anya ọrụ ihu na kwa bụ ntọala maka n'ihu ngwa nkwado na machie interface na ogbo, dị ka xrdesktop ma ọ bụ Pluto VR.
Mgbanwe ọzọ bụ na ihe nkesa na ndị nchịkwa Komnozitny que etinye ya na usoro ọrụ dị iche iche, dị ka ọrụ na-aga n'ihu iji nye ikike ijikọ ọtụtụ ngwa OpenXR na ihe atụ nke ọrụ Monado ma lelee ha n'otu oge site na iji mgbatị XR_EXTX_overlay.
Na mgbakwunye, enyego ya na ụdị ọhụụ nke Monado 0.2, nkwado maka ndị na-ahụ maka Vive Wand na Valve Index na iji ya ijikwa ije na nnwere onwe atọ (3DOF, na-agagharị n'akụkụ atọ).
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, a na-ezube ịgbakwunye nkwado maka nnwere onwe isii (6DOF) site na iji sistemụ nyocha Lighthouse.
Agbakwunyere nkwado Bluetooth LE, nke a na-eji na njikwa maka njikwa Google Daydream 3DOF.
Gbakwunye onye njikwa arduino maka nnwale mgbe ị na-eke ndị njikwa gị.
The libsurvive emeghe ọnọdụ nsuso usoro njikwa na-ike n'ime mainframe.
Ntughari njiri mara onodu agbakwunyela nkwado maka eserese omenala, nke a na-eji ugbu a iji gosipụta ibu na CPU n'oge nsụgharị.
Monado-gui kwadoro ịchekwa nhazi na $ XDG_CONFIG_HOME / monado na $ HOME / .config / monado directories.
Agbakwunyere ikike iji hazie igwefoto stereo USB maka PSMV (PlayStation Move) na PSVR (PlayStation VR).
Redesigned ewu usoro.
Agbakwunyere nchekwa PPA maka Ubuntu na Monado, OpenXR-SDK na iwu udev xr-ngwaike.
Nkwado agbakwunyere maka ịmalite ọrụ monado-ọrụ site na mmalite site na ntọala na systemd.
Edere koodu oru ngo a na C ma kesaa ya n'okpuru ikikere ngwanrọ GPL na-akwado Boost 1.0, nke dabere na ikikere BSD na MIT, mana achoghi ekwuputa mgbe a na-ekesa oru ndi ozo na uzo abuo.
Ugbu a ikpo okwu na-akwado Linux na ndakọrịta na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ a na-atụ anya n'ọdịnihu.
Dị ka anyị kwurula na akụkọ nke ụdị ọhụrụ a, a na-agbakwunye Monado PPA maka Ubuntu, nke enwere ike ịgbakwunye site na ịmepe ọnụ na ịpị ihe ndị a na ya:
Na ịwụnye na ị ga-pịnye:
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Monado, Nwere ike ịlele nkọwa, yana inwe ike ịnweta koodu ntinye nke a, site na ebe nrụọrụ weebụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Monado 0.2 biara na otutu nkwado, Vive Wand na Valve Index na ndi ozo